Vodafone waxay muujineysaa in shabakadeeda 4G ee Spain loo isticmaali karo in lagu xakameeyo taraafikada hawada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn | Qalabka bilaashka ah
Vodafone waxay muujineysaa in shabakadeeda 4G ee Isbaanishka loo isticmaali karo in lagu sameeyo kantaroolka taraafikada hawada ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Vodafone ayaa soo bandhigtay intii lagu gudajiray Shirweynihii Dunida ee Mobaylada in maanta la heli karo oo ay leeyihiin teknolojiyaddii lagama maarmaanka u ahayd inay bilaabaan inay howlgeliyaan cusub Shabakada 5G gudaha Spain. In kasta oo ay ugub tahay, haddana waxa ay bilaabeen in ay soo qaadaan arrin laga yaabo in ay khusayso hoggaamiyeyaal badan, sida kuwa xakamaynta hawada kuwa isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, wax ay ballanqaadayaan inay ku qaban karaan iyagoo adeegsanaya shabakadooda 4G.
Sidii la filaayey, soo jeedintan waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyey hay'ado gaar ah, sidaa darteed Vodafone waxay bilaabeen inay la shaqeeyaan Wakaaladda Badbaadada Duulista Hawada ee Yurub xaqiijinta tijaabooyin taxane ah oo ka dhici doona Jarmalka iyo Spain. Faahfaahin ahaan, ayaa kuu sheegaya inaad u socoto heerkan, Vodafone waxay ahayd inay muujiso hirgalinta barnaamijkeeda qaar ka mid ah tijaabooyinka hordhaca ah ee si guul leh loogu qaaday Seville sanadkii hore.
Vodafone waxay cadeyneysaa in shabakadeeda 4G loo adeegsan karo Spain si loo xakameeyo isticmaalka hawada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ganacsiga
Intii lagu guda jiray tijaabadan hordhaca ah, Vodafone waxay muujisay in shabakadeeda 4G ay leedahay awood ku filan xakamee diyaarad culeyskeedu yahay 2 kiilo. Hadafka dhabta ah ee adeegsiga shabakadan ayaa ah in lala socdo dhamaan aaladaha iyo tikniyoolajiyadda amniga ee loo heli karo adeegsiga ganacsiga laga bilaabo sanadka 2019.
Waqtigan xaadirka ah, qodob asaasi ah waa in lagu xisaabtamo waana taas barmaamijkan looguma talagalin dabagalka iyo xakamaynta drones-ka gaarka loo leeyahay, laakiin kuwa isticmaalka ganacsiga iyo tan, marka lagu daro, waxay leeyihiin cabbir ka ballaaran. Faahfaahin kale oo muhiim ah ayaa ah in shabakada loogu talagalay inay la socoto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhererkoodu yahay 400 mitir, oo ah joog sare oo ay ku qasbi karto aalad inay soo degto maxaa yeelay waxay faragalin ku yeelan kartaa wadada diyaaradaha ganacsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Vodafone waxay muujineysaa in shabakadeeda 4G ee Isbaanishka loo isticmaali karo in lagu sameeyo kantaroolka taraafikada hawada ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
Waad ku mahadsantahay qoraaladaada, 3D daabacadaha jihada aad siisay waa mid aad u fiican. Waxaan u isticmaalaa Libaaxa 2 oo si fiican buu u shaqeeyaa, sidoo kale, waa Isbaanish sidaa darteedna caawimaadda halkan waa mid cajiib ah
Porsche waxay adeegsan doontaa tikniyoolajiyadaha daabacaadda ee 3D si ay qaybo uga samaysato baabuurradeeda caadiga ah
Keratin, waa walax borotiin ku habboon in loogu isticmaalo daabacadaha 3D